बेइजि in मा कसरी रोजगार पाउन?
28 सक्छ, 2021 एन्टिका कुमारी चीन, जब
बेइजि China's चीनको राजधानी हो र यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि दुबै मूल निवासी र पूर्व पाटीहरूका लागि व्यावसायिक सम्भावनाको भरपर्दो शहर। शहरको रोजगारी बजार र सम्भावित क्यारियर विकल्पहरूको बारेमा जान्न केहि समय लिनुहोस् बेइजि toको यात्रा गर्नु अघि र सुरू गर्नु अघि
शरणका लागि आवेदन दिनुहोस्: चीन। यहाँ जान्नुहोस् !!
अक्टोबर 31, 2020 करुणा चन्दना चीन, शरणार्थीहरू
UNHCR को कार्यालय बेइजि inमा छ। यो १ 1980 s० को दशकमा स्थापना भएको थियो। त्यस बेलादेखि चीनमा शरणार्थीहरू छन्। चीनमा शरणार्थीहरूलाई चिनियाँ सरकारले मान्यता दिएका र सुरक्षित छन्। शरणका लागि आवेदन दिनुहोस्: चीन। UNHCR अनुसार,
पाकिस्तानका लागि चीन भिसा
अक्टोबर 20, 2020 एन्टिका कुमारी चीन, पाकिस्तान, यात्रा
पाकिस्तानी कूटनीतिक पासपोर्ट धारकहरूलाई भिसाबाट हटाइएको छ। र मुख्य भूमि चीनमा days० दिनसम्म र चीनको ह Hongक Kong एसएआर र मकाओ एसएआरमा १ remain दिनसम्म रहन सक्छ। पाकिस्तानका आधिकारिक राहदानी धारकहरूलाई भिसाबाट हटाइएको छ।
सेप्टेम्बर 16, 2020 एन्टिका कुमारी चीन, भिसा
चीनमा भिसाका लागि आवेदन दिंदा, तपाईले अनुसरण गर्नु पर्ने केहि चरणहरू छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले तपाईंलाई सहयोग पुर्‍याउँछ यदि भिसाका लागि आवेदन दिन वैध पासपोर्ट छ भने। तपाईलाई आवाश्यक पर्ने एक आवेदन फारम छ
कस्तो प्रकारको यातायात तपाई चीनमा पाउन सक्नुहुन्छ?
20 सक्छ, 2020 एन्टिका कुमारी चीन, नजिकिदै गर
चीनको यातायात प्रणाली १ since। Since पछि सुधार भएको छ। आज चीनमा एयरपोर्ट, रेल, राजमार्ग, सबवे, बन्दरगाह र जलमार्गहरूको बृहत नेटवर्क छ। ती मध्ये, उच्च-गति रेल लाइनहरू, राजमार्गहरू, र धेरै नयाँ मेट्रोहरूले स्थानीय जनताको दैनिक जीवनलाई सब भन्दा सुधार गरेको छ।
चीनको लागि यात्रा लागत
अप्रिल 21, 2020 शुभम शर्मा चीन, यात्रा
चीन विश्वको सबैभन्दा जनसंख्या भएको देश हो र पूर्वी एशियामा अवस्थित छ। चीनको संसारमा केहि मनमोहक ठाउँहरू छन् जुन सबैले आफ्नो जीवनमा एकपटक अवलोकन गर्नुपर्दछ। तपाईंले पाउनुहुने खानामा आउँदैछ
चीनमा रोजगारहरू पाएर तपाईंको सपनाहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्
अप्रिल 14, 2020 शुभम शर्मा चीन, जब
चीन, विश्वमा सब भन्दा बढी जनसंख्या भएको देश पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था को रूप मा परिचित छ। चीनको अर्थतन्त्रमा आउँदैछ, यो हरेक बर्ष उफ्रिन्छ। यसले धेरै रोजगारी प्रस्तावहरू पनि सिर्जना गर्दछ
यसको सर्वश्रेष्ठ समयमा मेस्मराइजिंग चीन अन्वेषण गरौं
अप्रिल 2, 2020 करुणा चन्दना चीन, यात्रा
चीन भ्रमण गर्न उत्तम समय चीन एक बर्ष दौर यात्रा गन्तव्य हो। तपाई जानुहुँदा, जहाँसुकै पनि भ्रमण गर्न लायकको स्थान हुन्छ। मौसम-अनुसार, चीन भ्रमण गर्ने उत्तम समयहरू वसन्त (अप्रिल April मे) र शरद (सेप्टेम्बर – अक्टुबर) हुन्, जब प्राय: